Eyona mveliso ye-nootropic powder kunye nomveliso
I-Wisepowder inoluhlu olupheleleyo lwezixhobo zeNootropics powder, kwaye inenkqubo yolawulo lomgangatho iyonke.
Ibonisa i-1-20 yeziphumo ezingama-64
I-Aniracetam powder (72432-10-1)
i-beta carboline powder (244-63-3)
I-Centrophenoxine powder (3685-84-5)
I-Cetilistat powder (282526-98-1)
I-Choline Bitartrate powder (87-67-2)
I-Coluracetam powder (135463-81-9)
I-Dehydroepiandrosterone (DHEA) umgubo (53-43-0)
I-Emoxypine powder (2364-75-2)
I-Fasoracetam powder (110958-19-5)
I-Galantamine Hydrobromide powder (1953-04-4)
I-Galantamine powder (69353-21-5)
I-Nootropics powder okanye iziyobisi ezi-smart zaziwa njengeekhompawundi okanye izongezo ezonyusa ukusebenza kwengqondo. Basebenza ngokwandisa ukusebenza kwengqondo njengokukhumbula, ukuyila, ukukhuthaza kunye nokuthathela ingqalelo. Uphando lwamva nje belugxile ekumiseni i-nootropics enokubakho evela kwiimveliso zokwenziwa kunye nezendalo. Impembelelo ye-nootropics kwingqondo ifundwe ngokubanzi. I-nootropics ichaphazela ukusebenza kwengqondo ngokusebenzisa inani leendlela okanye iindlela, umzekelo, indlela yedopaminergic. Abaphandi bangaphambili baxele impembelelo ye-nootropics kunyango lokuphazamiseka kwememori, njenge-Alzheimer's, iParkinson's kunye nezifo zikaHuntington. Ezo ziphazamiso ziyajongwa ukuphazamisa iindlela ezifanayo ze-nootropics. Yiyo loo nto ii-nootropics ezisandula ukwenziwa zenziwe ngobunono nangempumelelo kwindlela. I-nootropics yendalo ezinje ngeGinkgo biloba ziye zafundwa ngokubanzi ukuxhasa izibonelelo ze-nootropics eziluncedo.
Kukho ii-nootropics ezimbini ezahlukeneyo: zokwenziwa, iilebhu eyenziweyo njenge-Piracetam powder, kunye ne-nootropics yendalo kunye ne-herbal, njengeGinkgo biloba kunye nePanax quinquefolius (American Ginseng). I-Nootropics ingqinwa ukukhulisa ukusebenza kwengqondo ngelixa ngaxeshanye isenza ingqondo ibe sempilweni.
Iindlela zokusebenza kweNootropics
I-Nootropics powder ehamba phambili inciphisa amanqanaba e-malondialdehyde kwingqondo, inyusa amanqanaba eimolekyuli ze-antioxidant ezifana; glutathione kunye ne-superoxide dismutase. v
Ukudibana kwe-dopamine-D2, i-serotonergic kunye ne-GABAB receptors. v
Ukuncitshiswa kwamanqanaba e-MAO-A kunye ne-plasma corticosterone. v
Unciphise uxinzelelo lwe-noradrenaline kunye nokunciphisa ukuvela kwee-monoamines eziphambili. v
Ukuthintela umsebenzi we-acetylcholinesterase kwingqondo. v
Ukonyuka komxholo we-lipids kunye ne-phospholipids kwingqondo. v
Ikhusela i-neurons nxamnye netyhefu ye-glutamate-induction. v
Ukutshintshwa komsebenzi we-NMDA receptor. v
Umsebenzi wesoftware osimahla; kunciphisa i-H2O2- inkuthazo lwe-cytotoxicity kunye nomonakalo weDNA.
Ukukhuthaza ukuFunda kunye neMemori:
Ukufunda yinkqubo yokufumana ulwazi olutsha okanye ukuguqula ulwazi esele lukhona, ngelixa inkumbulo kukukwazi kwengqondo ukufaka, ukugcina, kunye nokufumana ulwazi xa lufuneka. Zombini ukufunda kunye nenkumbulo kubalulekile ukonwabela amava, ukucwangcisa iintshukumo zangomso, kunye nokugcina ubomi obuphezulu.
Ukuphucula ukuGxila kunye nokuqwalaselwa:
Ukugxila kunye nokuqwalaselwa kukukwazi ukugxila kwingqondo yomntu kwinto enye ngelixa ungayikhathaleli inkuthazo yendalo esingqongileyo. Zininzi izinto ezahlukileyo zokunikwa ingqalelo, kwaye zenza eminye imisebenzi emininzi yokuqonda.
Ukuphucula amandla akho ebongo:
Ingqondo itya malunga neepesenti ezingama-20 zamandla omzimba, kwaye amandla engqondo adibene nempilo yengqondo iphela. Ngaphandle kwamandla awaneleyo, konke ukuqondisisa kwengqondo kuya kuncipha.
· Ngamana ungakhokelela kwiMood Better
Imood ibandakanya iindidi zamazwe ezengqondo, kubandakanya uxinzelelo kunye noxinzelelo. Isimo esibi sokuziphatha siye sabonakaliswa ukuba sichaphazele amandla engqondo, ukuxhathisa uxinzelelo kunye nokuhamba kwengqondo.
Yandisa uxinzelelo lwakho lokuqina
Uxinzelelo ngokucacileyo lunempembelelo yokusebenza kwengqondo kunye nokuphila jikelele. Ngelixa ulawulo loxinzelelo kufuneka lube yinxalenye ephambili kuyo nayiphi na inkqubo yokuphucula ukusebenza kwengqondo, ezinye i-nootropics powder nazo zinganceda.
· Nikezela ngeNeuroprotection
Ngelixa abantu abaninzi besebenzisa ezi zinto ukulungiselela ukuqina kwengqondo kwangoko, izibonelelo ze-nootropics zexesha elide akufuneki zijongwe. Olunye uphando lubonisa ukuba iinkalo zokwehla kwengqondo ezinxulumene nobudala zinokuqalisa kubantu abadala abasempilweni, abafundileyo nangona bekwiminyaka yabo yama-20 nama-30. Ngamanye amagama, akunakuqala kakhulu ukuba uqalise ukukhathalela ubuchopho bakho-kwaye iiPooters ze-nootropics zinokudlala indima.
Uyisebenzisa njani i-Nootropics?
Ukuba uza kuqala ukuvavanya i-nootropic Powder, kuyakufuneka wenze utyalomali oluncinci ukuze uqalise. Uninzi lwe-nootropics esemgangathweni ophezulu zithengiswa kwifom yazo enyulu njengezowder ze-nootropics. Ngokwemvelo, unokuba uzibuza ukuba kutheni umele ukulinganisa kunye ne-nootropic powder indlela yokuthatha.
Kuba uninzi lwezi khompawundi zibakhona ngendalo, ungongeza oku kutya okusekwe kwizityalo ekutyeni kwakho. Ngaphandle koko, ungasebenzisa i-vegan kunye nezongezelelo zezinto eziphilayo ekutyeni kwakho ukuze ufumane izibonelelo ezifanelekileyo. Okanye, ungazongeza kwifomu yomgubo kwii-smoothies, iti, okanye ijusi.
Abanye abantu bayaliwa zizinto ezimbalwa; Ngesi sizathu, kufuneka umamele umzimba wakho kunye nogqirha wakho kwaye usebenzise ezi zixhasi ze-nootropic ngokufanelekileyo.
Akukho songezelelo sinokukhupha iziphumo ezinobungozi bokukhetha impilo ngendlela engeyiyo exhasa impilo yakho yengqondo. Ke, kuya kufuneka wenze utshintsho oluchanekileyo kwindlela yokuphila ukuze ufumane ezona zibonelelo zilungileyo kwezi ziyobisi zibukhali.
Ngaba iiNootropics zikhuselekile?
Ukuchonga ukhuseleko lwe-nootropic kuntsonkothileyo kunokuba kunokubonakala. Ngokungafaniyo namachiza amachiza, i-nootropic supplements akufuneki ukuba ivavanywe kwikliniki ibonisa ukhuseleko lwayo ngaphambi kokuba ithengiswe. Yonke inkqubo yemveliso ye-nootropics inokuchaphazela ukhuseleko lwe-nootropic. Ukusuka kumthombo we-nootropics powder ukuya kwizidakamizwa ze-nootropics.
I-Nootropics powder sisithako esibaluleke kakhulu sezongezo ze-nootropics, umenzi we-nootropics powder ngumthombo ngqo we-nootropics. Umzi mveliso olungileyo we-nootropics powder kufuneka ube neendawo zokwenzela ezenzelwe ukhuseleko njengeyona nto iphambili ephambili.
Ezinye izinto ezichaphazela i-Nootropics zikhuselekile ziquka:
(1) Ukhuseleko oluxhaswe ngophando
Eyona ndlela yokuqinisekisa ukhuseleko lwe-nootropic kukuhlolwa kwezonyango lomntu.
(2) Iifom ze-nootropic eziphambili
Xa izithako ze-nootropic (i-nootropics powder ephezulu) ziboniswa ngeendlela ezikumgangatho ophezulu, ukhuseleko lwabo lungaphucuka
(3) Ukwenziwa ngononophelo
(4) Ukuhanjiswa okucocekileyo
Ngaba zilunge njani i-nootropics ezikhuselekileyo ukuba iicaputer eziziphetheyo zilungile kuwe? Kwizongezelelo ze-nootropic, ngamanye amaxesha sibona abenzi besebenzisa iicaphule, izongezo kunye nokhetho olunokuthandabuzekayo oluye lwayanyaniswa nobungozi bempilo.
(5) Thatha ii-nootropics ngokuchanekileyo
Ukuba ufuna ukuthenga ii-nootropics, ukucinga kokuqala mhlawumbi kukuba "Ngaba ii-nootropics zikhuselekile?" . Kunzima ukunika impendulo echanekileyo okanye ewe. Ngenxa yokuba kukho izinto ezininzi kakhulu ezinokuchaphazela ukhuseleko lwe-nootropic, ukusuka kwisithako ukuya kwisithako kunye ne-brand to brand. Ngaphambi kokuba uthenge i-nootropics powder, kungcono wenze uphando oluninzi, ukusuka kumthombo we-nootropics powder ukuya ekuhanjisweni.